Piston Air Compressor Factory - China Piston Air Compressor Manufacturers, Suppliers
Ịghasa Air Compressor
Integrated ịghasa Air Compressor
PM ịghasa Air Compressor
Anọ ọdụ ịghasa Air Compressor
Abụọ ogbo ịghasa Air Compressor
Piston ikuku Compressor
Belt-akwagharị Air Compressor
Igba Iron Air mgbapụta
Mgbapụta ikuku ikuku mmanụ
Akụrụngwa Ọgwụ ikuku
Igwe nhicha ikuku friji
Mmiri mgbapụta miri emi
Ọrụ Mgbasa Ozi Mgbe Azụchara
Gịnị kpatara anyị?
Medical ụlọ nyocha eze nkịtị P ...
BM Ụdị 2HP/24L & 50L Di ...
Igwe eji arụ ọrụ ikuku
2inch ruo 8inch Submersible ...
Ogwe ụlọ nyocha ahụike Silent 0.75HP ~ 4HP Oil Compressor Air Free
Compressor ikuku na -enweghị mmanụ na -enye ikuku dị oke ọcha na -enweghị mmanụ, mkpọtụ ahụ dịkwa ala karịa 68db. Ụgwọ mmezi dị ala yana ogologo ndụ niile dị ogologo. A na -ejikarị ya maka ọgwụgwọ ahụike, ụlọ nyocha na mpaghara kemịkalụ na ihe ndị ọzọ.
Ihe mkpuchi ikuku na-ekebe na-enwekarị mgbapụta ikuku, moto, tank na ihe ndị mejupụtara ya. Ike sitere na 0.75HP ruo 30HP. Nfuli dị iche iche nwere ike dakọtara na ikike tank dị iche iche maka nhọrọ ndị ọzọ. A na -ejikarị ha agba agba, ịchọ mma, ịrụ osisi, inye ngwaọrụ pneumatic ike, akụrụngwa akpaaka na ihe ndị ọzọ.
Ụdị BMdị 2HP/24L & 50L Compressor Air Direct-Driven na asambodo CE/UL
A na-ejikọ igwe na-emegharị ikuku na-akpaghị aka ozugbo na mgbapụta ikuku piston na-etinye na tank ikuku. Ọ bụ ụdị mkpanaka ma dịkwa mfe maka iburu ya. Ike sitere na 0.75HP ruo 3HP, na tankị sitere na 18liters ruo 100liters. Enwere ike iji ya n'ọtụtụ ọrụ ụlọ, ọrụ ime ụlọ & n'èzí, dị ka ịchọ mma, ntu, eserese & ịgba mmiri, ndozi na ihe ndị ọzọ.
FL Ụdị 2HP/24L & 50L Compressor Air Direct-Driven na asambodo CE/UL
Ọhụrụ Silent Medical Lab Dental Oil Free Air Pump 550W 750W 1100W 1500W
Mgbapụta ikuku na -enweghị mmanụ na -enye ikuku dị oke ọcha na -enweghị mmanụ, mkpọtụ ahụ dịkwa ala karịa 68db. Ụgwọ mmezi dị ala yana ogologo ndụ niile dị ogologo. A na -ejikarị ya maka ọgwụgwọ ahụike, ụlọ nyocha na mpaghara kemịkalụ na ihe ndị ọzọ. Ike ndị a bụ 550W, 750W, 1100W, 1500W ma enwere ike dakọtara ya na oke ike dị iche iche.
Ọkwa dị elu 0.75HP ~ 30HP Nkedo Iron Piston Air Pumps for Belt-driven Air Compressor
Mgbapụta ikuku piston na-emegharị emegharị na-ewu ewu n'ahịa n'ihi ọnụahịa asọmpi ya, ike ya na ogologo ndụ ya. A na -ejikọ nfuli ikuku ikuku piston na crankcases na cylinder, aluminom ma ọ bụ piston ígwè, aluminom ma ọ bụ mkpanaka njikọta ígwè, yana mgbanaka piston dị mma nke ukwuu. Ikuku ikuku nke usoro a sitere na 60L/Min ruo 4500L/min. Ihe owuwu ya siri ike na -eme ka ọ bụrụ ihe a pụrụ ịdabere na ya, na -adịgide adịgide ma na -adịte aka dị mma maka ịrụ ọrụ n'èzí ma ọ bụ ime ụlọ.
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga -enwe na aka n'ime 24 awa.ase